Timedatectl iyo Hwclock: Amarada lagu dejinayo taariikhda iyo waqtiga Linux | Laga soo bilaabo Linux
Timedatectl iyo Saacada Waxay yihiin 2 waxtar leh amarada hagaajinta waqtiga (taariikhda iyo waqtiga), ku jira Nidaamka Howlgalka GNU / Linux.
Marar badan markii la rakibayo ama la isticmaalayo a Nidaamka Howlgalka GNU / Linux, qaar ayaa laga yaabaa inay qaddariyeen markii la bilaabayo mar kasta, fadhi adeegsade oo ku jira jawiga garaafka ama loo maro boosteejada, waqtiga (taariikhda iyo waqtiga) del Nidaamka hawlgalka kombiyuutarka isbeddel (khalad la'aan). Xaaladaha kale, badiyaa way is beddelaysaa markaad qaabeysid laba kabood (laba kabood) iyo isticmaalka ah Sistemyada Hawlgalka rakibay.
Xaaladda koowaad ee lagu sharraxay, taasi waa, iyadoo la adeegsanayo oo keliya GNU / Linux, marar badan dhibaatada si ku meel gaadh ah ayaa loola macaamilaa, taas oo ah, aan si hufan loo xallin, hagaajinta codsi qaabeynta saacad ahaan qaab ahaan ama iyadoo la adeegsanayo amar "taariikh".
Xaaladda labaad, taasi waa, iyadoo la adeegsanayo 2 ama in ka badan Nidaamyada hawlgalka kala duwan, badanaa GNU / Linux iyo Windows, dhibaatada badanaa waxaa lagu xaliyaa si ku meel gaar ah iyadoo gacanta lagu dejinayo waqtiga laga bilaabo kan ugu horeeya ilaa kan waqtiga (taariikhda iyo waqtiga) kan labaad, iyo xaaladaha qaarkood waqtiga BIOS kombiyuutarka.
2 Timedatectl iyo Wakhtiga Amarka
El waqtiga isku khaldanaanta beenta ah, ee habka in our Nidaamka Howlgalka GNU / Linux way shaqeeyaan taariikhda iyo waqtiga. Taasi waa, isku mid maahan sida loo farsameeyo Nidaamyada hawlgalka gebi ahaanba ka duwan sida Windows, inkasta oo ay haa tahay sida kuwa kale, sida, MacOS.
En GNU / Linux ama MacOS, qaabka ayaa loo isticmaalaa UTC (Iskuxidhka Waqtiga Caalamiga ah) in la dejiyo waqti isku mid ah, iyadoo aan Windows lagu jirin. Windows waxay u qaadaneysaa in kumbuyuutarku kaydinayo waqtiga saxda ah ee la cusboonaysiiyay Saacadda qalabka Motherboard-ka, taasi waa, gudaha BIOS. Tan iyo markii, ka Saacadda iyo / ama BIOS waa inaad la socotaa waqtiga dhaafay, xitaa marka kumbuyuutarka uu dansan yahay.
Sidaa darteed, asal ahaan, Windows had iyo jeer u maleeyaa in waqtiga saxda ah lagu keydiyay Waqtiga maxaliga ah (Saacadda / BIOS) ka kombiyuutarka, halka GNU / Linux, sidaan horay u soo sheegnay, waxay u qaadaneysaa in waqtiga lagu keydiyo Waqtiga UTC, taas oo sabata dib u dhaca waqtiga meertada ah ee lagu calaamadeeyay iyadoo la adeegsanayo si isdaba-joog ah 2. Sidaa darteed, xalka macquulka ah waa in si sax ah loo hagaajiyo Waqtiga maxaliga ah (Saacadda / BIOS) kombiyuutarka, oo u diyaari Nidaam kasta oo Howlgal si aad ula xiriirto si aad u waafajiso waqtiga la tusayo isticmaalaha.
Timedatectl iyo Wakhtiga Amarka
Waxaa jira amarro lagu xallinayo dhibaatadan, taas oo ah, in la isku hagaajiyo taas GNU / Linux kula xiriiraan qalabka (Saacad / BIOS) ka kombiyuutarkaaga oo aad iskula jaanqaadayso, ilaa tus isticmaale isla waqtigaas, sidaad adigu sameyso Windows.
Ka hor inta aan la dilin, qaabeynta saxda ah ee waqtiga (taariikhda iyo waqtiga) gudaha BIOSKa dib fulinta amarka, waxaa la doorbidaa in dib loo bilaabo oo la xaqiijiyo in aysan isbeddelin, marka hore tan Nidaamka Howlgalka GNU / Linux ka dibna ku jira BIOS.
Amarkan casriga ahi waa mid gaar ah, kuwaa GNU / Linux Distros inay rakibeen Systemd sida Nidaamka bilowga 1 (PID 1), tusaale ahaan, DEBIAN GNU / Linux. Tan iyo markii, waa shaqeyn ay bixiyaan nidaamkan iyo maamulaha adeegyada.
Si loo gaaro amarkaas, u oggolow GNU / Linux kula xiriiraan qalabka (Saacad / BIOS) ka soco kumbuyuutarka oo aad la shaqeysid, amarka soo socda waa in lagu fuliyaa:
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan amarkan, ikhtiyaarka «set-local-rtc [BOOL]»Iyo kuwa kale, oo ku saabsan DEBIAN GNU / Linux, waad heli kartaa Buugga tooska ah (Manpages) ee baakadaha iyo amarrada isku mid ah, ee soo socda isku xirka. Ama aqri bogga nin xaafadaada ah adoo ordaya «man timedatectl«.
Halyeeygan oo wali amar ku bixiya, wuxuu gaar u yahay dhammaan noocyada GNU / Linux Distros, maadaama aysan ku xirnayn Nidaam, midna nidaam kale iyo maamule adeeg toona.
Si loo gaaro amarkaas, u oggolow Nidaamka hawlgalka GNU / Linux kula xiriiraan qalabka (Saacad / BIOS) ka soo qaad kumbuyuutarka isla markaana la shaqeysiiya, taas oo ah, isku xir waqtiga isku midka ah ee BIOS, amarka soo socda waa in lagu fuliyaa:
Nota: Xaaladda ka soo horjeedka ah, taasi waa, haddii halkii aad rabto inaad iskula jaanqaadi karto gadaal (ku hagaaji waqtiga BIOS ee hadda ku jira Nidaamka Howlgalka) markaa waxaad isticmaali kartaa amarka «hwclock -s»Ama amarka «hwclock --hctosys«.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan amarkan, ikhtiyaarka «-w»Iyo kuwa kale oo ku saabsan DEBIAN GNU / Linux, waad heli kartaa Buugga tooska ah (Manpages) ee baakadaha iyo amarrada isku mid ah, ee soo socda isku xirka. Ama aqri bogga nin xaafadaada ah adoo ordaya «man hwclock«.
Laga bilaabo hadda, markaad joojiso isticmaalka Qaabka UTC ee taariikhda iyo waqtiga, taasi waa, marka la isticmaalayo waqtiga (taariikhda iyo waqtiga) del BIOS waayo, GNU / Linux ama dhowr Nidaamyada hawlgalka, Dhibaatada qaabeynta waqtiga qalabka ayaa laga fogaan doonaa oo labada nidaamba had iyo jeer waxay yeelan doonaan waqti isku mid ah, iyada oo aan la helin.
Nidaam kale oo beddel ah oo lagu dejinayo taariikhda iyo waqtiga Nidaamka Howlgalka GNU / Linux iyo waafajinta waa la BIOS kombiyuutarka, adoo adeegsanaya amarka «date»Iyo«hwclock»Ma waxa soo socda:
Fulinta amarrada amarrada a fadhiga xididka si loo cayimo taariikhda 08:00 markay ahayd Maarso 07, 2020.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Timedatectl y Hwclock», 2 faa iido leh «Comandos de GNU/Linux» loo dejin lahaa taariikhda iyo waqtiga kanaga «Distros GNU/Linux», gaar ahaan xalinta dhibaatooyinka waqtiga khaldan ee «ordenadores con doble booteo (inicio)», noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Timedatectl iyo Hwclock: Amarro lagu dejinayo taariikhda iyo waqtiga Linux
octavio dos santos dijo
Salaan! Aad baad u mahadsan tihiin, xogtu way i caawisay, waxaan isticmaalayaa qorfe manjaro mana jirin waddo aan qaab garaaf ahaan ugu habeeyo, ama is waafajinta internetka, wax fudud iskamay beddelin ... laakiin waad ku mahadsan tihiin mar hore ayaa la xalliyey. 😀
Jawaab octavio dos santos
Salaan Octavio! Waxaan ku faraxsanahay in qodobkaasi uu kuugu qancay. Waad ku mahadsantahay faalladaada iyo wax ku biirintaada.
kiiskeyga waa inaan u beddelaa / etc / adjtime sidii 'LOCAL' halkii UTC 'maxaa yeelay linux wuxuu u beddelay waqtigii bios -ka UTC daaqadahana si khalad ah bay u qaateen; leh
saacad –ku dhawaaqid
Waxaan awoodey inaan xaqiijiyo inuusan dib u beddelin markii uu hagaajintaas samaynayey
Salaan, Fabian. Waad ku mahadsan tahay faalladaada iyo waxtarkaaga.
Liis garee nooca cusub ee PowerDNS Recursor 4.3, oo ah serverka DNS xal
Cilad ayaa loo oggol yahay inay ka diiwaangeliso aagagga phishing astaamaha astaamaha Unicode